Kyrgyzstan: Fihetsiketsehana tahaka ny isan-taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2018 12:34 GMT
Roa taona izay no lasa hatramin'ny naha-voaongana ny filoha teo aloha Askar Akaev. Niteraka vanim-potoana vaovao nisokafana ara-politika ao amin'ny repoblika kely be tendrombohitra izany fiovan'ny fitondràna izany, na ny “Revolisiona Tolipa” ho an'ny maro.
Na dia eo aza ny fitomboana ara-toekarena, ny ady amin'ny kolikoly sy ireo fampanantenana maro hafa mbola tsy notanterahan'ny mpandimby an'i Akaev, Kurmanbek Bakiyev, matetika miaina fihetsiketsehana ara-politika ataon'ny mpanohitra ny firenena (Efa nitatitra izany teo aloha ato sy ato ny Global Voices).
Fotoana fanoherana indray any Bishkek. Hoy ny Praiminisitra teo aloha Felix Kulov:
“Inona no tanjonay? Fanavaozana ny lalàm-panorenana sy fifidianana filoham-pirenena mialoha ny fotoana.” Tsy manana tanjona hafa izahay. “Na dia halan'ireo mpanohana an'i Bakiev aza izany. Tena zava-dehibe ho azy ireo ny mihazona ny fahefana amin'ny fomba rehetra. “
Mba hahazoana fahitana momba ny toe-draharaha ara-politika ao Kyrgyzstan, tsara ny mijery ny lahatsoratra nosoratana tao amin'ny neweurasia tamin'ny taona 2006. Mampalahelo fa tsy mba nahita fiovana aho hatramin'ny nanoratana izany:
Samy manana ny heviny mikasika izay tokony homena tsiny ny tsirairay – indrindra indrindra ny filoham-pirenena teo aloha Akaev, toa toy ny tsy nisy fifandraisana taminy mihitsy ireo izay eo amin'ny fahefana ankehitriny. Ary inona no tokony hatao – fanokafana indray ny orinasa! Fanavaozana ny lalàmpanorenana tsy misy hatak'andro! Maka fampiasam-bola vahiny! Manohera!
Bilaogy marobe no nanara-maso ny hetsi-panoherana amin'izao fotoana izao any Bishkek:
Monina ao Bishkek i Teo Kaye ao amin'ny Registan.net, manana ny fakantsariny sy ny peniny amin'ny fanaovana sariitatra, manome vaovao farany momba ny zava-nitranga tany amin'ny kianjan'ny renivohitra izy. Manamarika graffiti vaovao manohitra an'i Bakiyev i Teo ary efa nanome ny fandalinany ny toe-draharaha ara-politika:
Na dia zavatra tsy ho avelan'i Bakiyev aza ny fametraha-pialàna an-katerena, mety hiverina indray ny endrika fanavaozana maimaika amin'ny lalàm-panorenana. Ny fanontaniana, mazava ho azy dia hoe, ahoana no hahatongavan'i Bakiyev sy Kulov amin'ny marimaritra iraisana sy mifanaraka amin'izany, ary ahoana ny fomba hifehezana ireo mpanao fihetsiketsehana marobe.
Bilaogera maro avy ao Kyrgyzstan ihany koa no nandefa tatitra mivantana avy any Bishkek. Jereo ny morrire (RU) raha hijery sary ary koa ny an'ilay mpikatroka mpanohitra Edil Baisalov ao amin'ny LJ. Na dia mbola tsy tafiditra amin'izao fotoana izao aza ny sary, manana lahatsoratra mahaliana i Kyrgyz Report fotoana vitsivitsy lasa izay.
Ao amin'ny pejy Kyrgyzstan ao amin'ny neweurasia, manome ny fomba fijeriny momba ireo zava-mitranga any Bishkek i Tolkun sy i Mirsulzhan. Samy misalasala ny amin'ny antony manosika ny ankamaroan'ny mpanohitra sy ny ankamaroan'ireo mpanao fihetsiketsehana, izay samy miseho eny an-dalambe mba hahazo vola nampanantenaina izy roa tonta. Mirsulzhan mitatitra hoe:
Nampiseho ny tsy fahaizany mikarakara hetsi-panoherana goavana ny mpanohitra. Natory tao anatin'ny tranolay miaramila ireo mpandray anjara, mitaraina fa tsy nomena sakafo izy ireo:
“Raha tsy namaly ny fitakian'ny mpanao fihetsiketsehana i Bakiyev, dia hisy korontana ao an-tanàna …”, hoy ny tovovavy roa teo an-kianja, izay avy any Kara-Balty. Nilaza koa ny iray tamin'izy ireo fa nisy solombavambahoaka iray (tsy fantany) nampanantena fa handoa azy ireo 1.000 soms isaky ny andro hihetsiketsehana (eo amin'ny 27 dôlara eo ho eo).
Tolkun, mitatitra avy ao Osh, milaza fa tsy niparitaka tany amin'ny tanàna hafa ny hetsi-panoherana. Nahita ny governemanta mahafehy tsara ny toe-draharaha ihany koa izy:
Mamintina ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao, mety hilaza aho fa 1: 0 ny isa ho an'ny governemanta, satria very fanajana avy amin'ny vahoakany tamin'ny andro farany ny mpanohitra. Tsy afa-po sy kivy ny olona. Na izany aza, fanombohana fotsiny izany ary haingana loatra raha hanatsoaka hevitra sahady. Andeha hojerentsika izay hitranga rahampitso.
Nandinika ihany koa i Sean Roberts tao amin'ny Roberts Report. Manantena izy fa hijanona hilamina ny hetsi-panoherana, saingy miahiahy izy noho ny fisehoan-javatra miavaka eo amin'i Felix Kulov sy Kurmanbek Bakiyev, lehilahy roa izay matetika miara-dia.